राजनीति Archives - Page3of 27 - Daily State News
पाँचथरमा कांग्रेसका केरुङ र गठबन्धनका काम्बाङबीच प्रतिस्पर्धा
फिदिमः संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा संविधान सभा सदस्यका लागि पाँचथरको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा चुनाब लडेका दुई पुरानै प्रतिस्पर्धीहरु प्रदेश सभा सदस्यका लागि चुनाव लड्दैछन्। प्रदेश सभाका लागि दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको पाँचथरमा प्रदेश सभा ‘क’ मा लोकतान्त्रिक शक्तिको गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति नरेन्द्रकुमार केरुङ र बाम गठबन्धनबाट निवर्तमान सांसद गणेश काम्वाङ चुनावी मैदानमा उत्रिएका […]
वाम गठबन्धन : १५ जिल्लामा अझै मिलेन भागबन्डा
शीर्ष नेतालाई जिम्मा काठमाडौं : एमाले र माओवादी केन्द्रले दाबी कायमै राखेपछि वाम गठबन्धन कार्यदलले १५ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन सकेको छैन । प्रत्यक्षतर्फ मनोनयनको एक साता बाँकी रहँदा कार्यदलले १५ जिल्लाको सहमति जुटाउने जिम्मा शीर्ष नेता सम्मिलित संयोजन समितिलाई नै दिने भएको छ ।संयोजन समितिमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, […]
बाजुरा कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति तथा उम्मेदवार वाम गठबन्धनमा
बाजुरा– नेपाली काँग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति तथा संविधान सभाका उम्मेदवार मनबहादुर रावल वाम गठबन्धनमा प्रवेश गरेका छन्। बुधवार बिहान उनी लामो समयदेखि सक्रिय पार्टीबाट मोह भंग भएको भन्दै बाम गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न पुगेका हुन्। २०३६ सालदेखि नेपाली काँग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ता रहेका उनी २०४७ देखि लामो समयसम्म जिल्ला सभापति भएका थिए । २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा […]
वाम एकताका लागि खोटाङमा बन्यो जिल्ला संयोजन समिति
खोटाङ- नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकताका लागि केन्द्रमा संयोजन समिति गठन भएको बीस दिनपछि खोटाङमा पनि समिति गठन गरिएको छ। नेकपा (एमाले) का जिल्ला अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक बबी चाम्लिङको संयोजकत्वमा मंगलबार सात सदस्यीय बाम एकता संयोजन समिति गठन गरिएको हो। समितिको सहसंयोजकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला अध्यक्ष देवान किराती […]
२६ असोज, काठमाडौं । वामपन्थी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको क्षेत्र बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन समस्या भएको छ । माओवादी र नयाँ शक्तिले धेरै सिट दाबी गरेको भन्दै एमाले नेताहरु सकसमा परेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गर्ने कार्यदलका संयोजक तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले धेरैजसो सिटको बाँडफाँड सहमतिमा टुंगिए पनि केही ठाउँमा मिलाउनुपर्ने बताए । […]
राजपा र फोरमले काठमाडौंमा मागे ४ सीट, कुन जिल्लामा कति ? (सूचीसहित)
२४ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग प्रतिनिधिसभामा ५५ सीट मागेको छ । प्रदेशसभामा १३१ सिट दाबी गरेको उसले कांग्रेसलाई जिल्लागत सूची नै बुझाएको छ । दुई दलले गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसलाई बुझाएको सूची अनलाइनखबरले पाएको छ । यो सूचीअनुसार राजपा र संघीय फोरमले काठमाडौंमा पनि प्रतिनिधिसभाको […]
एमाले नेता शेरधन राई बने प्रदेश सभाको उम्मेदवार
१८ असोज, भोजपुर । एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य तथा पूर्व सन्चारमन्त्री शेरधन राई प्रदेश सभाको उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ को भावी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार मानिएका राईलाई भोजपुर २ बाट सर्वसम्मत रुपमा उम्मेदवार सिफारिस गरिएको एमाले जिल्ला अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताए । यस क्षेत्रबाट उनको मात्र नाम सिफारिस भएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश सभाको […]
डडेल्धुरा कांग्रेसका दुई गुटबाट छुट्टाछुट्टै उम्मेद्वार सिफारिस, पार्टी सभापति देउवा निर्विकल्प
१७ असोज, डडेल्धुरा । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका दुई गुटबाट छुट्टाछुट्टै उम्मेद्वारको नामावली सिफारिस भएको छ । संस्थापन पक्षले समानुपातिक तर्फ नारु देवी ओझा महिला, पदम बिष्ट खुल्ला र भरत नेपाली दलित सिफारिस गरेको छ । संस्थापन कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरी सिफारीस गरेका नामहरु सार्वजनिक गरेको छ भने अर्को रघुवर […]
कोमल ओली आज एमाले प्रवेश गर्दै
दाङ : गतवर्ष मात्रै रेडियो नेपालको जागिर छोडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकोे केन्द्रीय सदस्य बनेकी चर्चित गायिका कोमल ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडने तयारी गरेकी छिन । गृह जिल्लामा आएर उनले राप्रपा छोडने तयारी गरेको ओलीको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ । कोमल वली राप्रपा छोडेर एमालेमा प्रवेश गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । सोमबार दाङको घोराहीमा हुने एमालेको […]
धनुषाको मिथिला बिहारी नगरमा एमाले विजयी
६ असोज, धनुषा । धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा एमाले बिजयी भएको छ । मेयरमा एमालेका अनिल यादवले ३२४२ ल्याएर विजयी भएका छन् । यस्तै उपमेयरमा पनि एमालेकै अनिताकुमारी साह ३१४७ मतले विजयी भएकी छन् । मेयरका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र यादवले २८३१ मत पाएका छन् भने उपमेयरमा कांग्रेसकै ललिता साहले २६९२ मत पाएकी छन् । […]